Qeybta 1: Hordhac:
Qeybta 2: Features / Hawlaha Apple Music on Android
Qeybta 3: farqiga u dhexeeya Apple Music on macruufka iyo Apple Music on Android
Qeybta 4: Download geeyo music lacag la'aan ah Android la TunesGo
Apple Music waa cajiib adeeg geeyo music oo gelineya inaad sii qulquli iyo helitaanka malaayiin songs on macruufka qalabka ay ku jiraan iPhone, iPad, iPod taabto, Mac iyo PC. Ee ah kuwa u maleeyeen in adeeggan waxa keliya oo loo riyaaqay karaan milkiilayaasha qalab macruufka ah oo dhan, waxaa war fiican ah in ay la dhakhsaha badan u socday si loo sameeyo u Android heli karaa sidoo kale. Dabcan, ma waxaad filan kartaa waa in la heli karo in dhammaan qalabka Android tan iyo qalab gaar ah oo keliya in la kulmo shuruudaha OS ugu dambeeyey waxay ahaan doontaa nasiib u raaxaysan.
Apple Music waa adeeg kaas oo aad bixisaa gabayo iyo albums ka fanaaniinta aad jeceshahay iyo in dareen sii ballaadhan; iska joogi doonaa isku mid xataa Android isticmaala. Si kastaba ha ahaatee, a isbedel yar yar ayaa weli la filayaa karo. Haddii aad ku cusub tahay adeeg ku Android, ka dibna laga yaabo in aad ka heli soo socda muuqaalada Siiyey Apple Music on Android.
1. Helitaanka malaayiin songs- mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan ee Apple Music on Android noqon doonaa helaan in ay malaayiin songs in dadka isticmaala ama macaamiishu ka heli doonaa. In kastoo Apple ma shaaca ka qaaday macluumaad aad u badan oo ku saabsan la mid ah, laakiin waxaa la filayaa in maktabadda song uu noqon doono weyn u isticmaala Android sidoo.
2. Times membership- Muuqaal kale in aan ka ogaado Apple Music for Android waa in dadka isticmaala yeelan doonaan in ay isku qori xubin ka ah bil kasta si ay u awoodaan inay ku raaxaystaan ​​adeegga. Weli waxaa jira eray ma ku saabsan muddada tijaabo lacag la'aan ah. Sidoo kale, waxaa jira karin macluumaad ku saabsan noocyada kala duwan ee qorshaha in Apple Music on Android bixin doonaa.
3. Helitaanka radio stations- Muuqaal kale oo cajiib ah ee Apple Music on Android waa in aad u helaan idaacadaha iyo dhufto ee sida Beats1 marka aad qori waa in. Taas macnaheedu waa in aad ku raaxaysan karaan music ah fanaaniinta caalamiga ah ee hal madal hal
4. playlist creation- Apple Music on Android sidoo kale aad u saamaxaaya in ay abuuraan playlists heesaha aad jeceshahay iyo sidoo kale la wadaagaan kuwa playlists saaxiibada.
5. Waxaad ku dartaa / delete- aad si fudud ku dari kartaa heeso, iyaga tirtirto iyo wax ka badan marka aad kala soo bixi music Apple on Android
6. Dhegayso offline- Muuqaal kale oo cajiib ah oo ay bixiyaan app waa in aad ku badbaadin karto sawiro u offline dhegeysiga. By sidaas samaynaya, waxaad awoodi doontaa inay ku raaxaystaan ​​music on qalabka Android aad xataa marka internet ee aan la shaqeeyo.
Apple Music on Android iyo Apple Music on macruufka leeyihiin kala duwan oo gaar ah iyo in uu yahay arrin cad tan iyo adeegga ayaa waxaa bilowday Apple Inc iyo sifooyinka gaarka ah ayaa la filayaa in la heli karo ee macruufka isticmaala. Liiska qaar ka mid ah kala duwanaashaha weyn ee u dhexeeya Apple Music on macruufka iyo Apple Music on Android soo socda waa.
1. Mid ka mid ah kala duwanaashaha weyn ee u dhexeeya music Apple on macruufka iyo Android waa in ay Gordhaw Kadhoofaan users, app waxaa loo isticmaali karaa si bilaash ah kula qashanka xadidan laakiin Android users yeelan doonaan in ay saxiixdo Times ah bil kasta taas oo loo bilaabo doono $ 10 bil kasta ka hor inta aanay dhagaysan kartaa in marka hore ay song. Taas macnaheedu waa in dadka isticmaala Android ma awoodi doonaan in ay helaan version maxkamad lacag la'aan ah sida dadka isticmaala macruufka.
2. farqiga u dhexeeya kale Apple music on macruufka iyo Apple Music on Android waa in halka adeegan mar horeba laga heli karaa qalabka macruufka, waxaa weli aan la sameeyey diyaar u Android isticmaala, waxaana la filayaa in la sameeyo laga heli karaa dayrtan.
3. Iyada oo macruufka Apple Music waxaa laga heli karaa labada kala duwanaansho-shakhsi ah xubin oo xubin qoyska, adeeggan u Android iyadoo hal doorasho u yimaadaan.
Download music geeyo lacag la'aan ah Android la TunesGo
> Resource > Music > Apple Music on Android